Uthakasela ithuba lokulingisa kwi-Unmarried
ULUNATHI Mampofu ungomunye wabalingisi abasha abajoyine umdlalo i-Unmarried eqala ngoMsombuluko kuMzansi Magic Isithombe: SITHUNYELWE
INTOKAZI ezakhele igama emdlalweni iThe River, uLunathi Mampofu ikufanisa nesibusiso ukulingisa emdlalweni i-Unmarried, ezoqala ngoMgqibelo ku-1Magic 103 ngo-8.30 ebusuku, bese ikhonjiswa ngoMsombuluko kuMzansi Magic (161), ngo-8 ebusuku.
ULunathi kulo mdlalo uvale isikhala sikaKeke Mphuthi owaba nokungaboni ngaso linye nabashadile bakwaFerguson uShona noConnie, abangabanikazi balo mdlalo.
Kulo mdlalo uzolingisa indawo kaClaudia Dunn, obengumkhangisi wezimpahla phesheya kwezilwandle osebuyela eNingizimu Afrika ngethemba lokubuyela kubangani bakhe nomndeni wakhe abengasawunakile.
“Lokhu kube yisibusiso kimina, ngiyambonga ngempela uNkulunkulu ngokuthola ithuba lokuba yingxenye yalo mdlalo. Okungijabulisa kakhulu ukusebenza nabakwaFerguson komunye wemidlalo yabo, nokungethemba nje ngalo mdlalo kuyangi-thokozisa kakhulu,” kusho uLunathi.
Uthe njengoba bese beqalile ukusebenza ukujabulele nokulingisa noThembisa noRenate Stuurman, abasebenzisana nabo kahle kakhulu kuze kube manje.
Abanye abalingisi abazobonakala kulo mdlalo nguSisa Hewana, Mtokozisi “EmKay” Khanyile noDon Mosenye.
UNomsa Philiso wakaM-Net, uthe balamukela ngezandla zombili ithimba elisha lababukeli balo mdlalo.
“Laba balingisi abasha baletha okusha kodwa kulo mdlalo okuzokwenza uthakaselwe abaningi, ngakho siyanxusa ababukeli bethu ukuthi baqhubeke nokujabulela isizini entsha yalo mdlalo,” kuchaza uNomsa.
Olunye uhlelo olusha okulindeleke ukuthi luqale ngesonto elizayo Uthando Nesithembu okuzobonakala kulona umndeni wakwaMseleku, inhloko yakhona okuwuMusa namakhosikazi akhe uMaCele, MaYeni MaKhumalo noMaNgwabe, abazobe bekhombisa ngempilo yabo kwisizini yesithathu okuvela ukuthi izodalula okuningi obekungakabonakali.
Bambe umgwaqo befuna amanzi
Injabulo kuzalwa obhejane abawu-13